चुनाव चिह्न बाँडफाँड : ओलीलाई बादलभित्रको सूर्य, प्रचण्डलाई ग्रहण लागेको सूर्य ! – E Kutumba
फागुन ८, २०७७ शनिबार ,कुर्सी नमिलेर र नपुगेर सरकार र सडकमा बाँडिएका नेकपाका नेताहरु सूर्य मेरै हो भनेर एकोहोरो हानथाप गरिरहेका छन् । यसले पनि मेरो, उसले पनि मेरो भनेर अचाक्ली गर्न थालेपछि सूर्यलाई नै रिस उठिसक्यो । त्यसैले दुवै नेकपाले सूर्य मेरो भन्दै सडकमा उफ्रेको दिन राम्रोसँग घाम लाग्दैन, सूर्य लुक्ने र छेकिने गर्छ । दुवैको प्रदर्शनमा सूर्य सहभागी नभए पनि दुई थरी नेकपा सूर्य आफ्नै भनेर मरिहत्ते गर्न भने छाड्दैनन् । दुवैलाई लाग्छ, सूर्य नभइ चुनाव जितिँदैन । जिन्दगीमा सूर्य चुनाव चिह्नमा नलडेकालाई पनि सूर्य चाहिएको छ । पटक-पटक सूर्य चुनाव लिएर दश बल्ड्याङ खाएकालाई पनि सूर्य नै चाहिएको छ । कत्ति न सूर्य चुनाव चिह्न हुनेबित्तिकै चुनाव जितेको र जित्ने जस्तो ।चुनाव चिह्न सूर्य भएकै कारण चुनाव जित्ने भए २०४८ सालमा एमालेले किन बहुमत नल्याएको ? २०७४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा सूर्य चुनाव चिह्न लिएर लडेका केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल मत परिणाम आउने बेला आफैंले किन उत्तानो टाङ लगाउन परेको ? सूर्य चुनाव चिह्न भएकाले मात्रै जित्ने भए गएको चुनावमा किन वामदेवको सूर्यलाई कांग्रेसले रुखले ढपक्कै ढाकेको ?
सिङ्गो सूर्य जसलाई दिए पनि कुरा मिल्दैन । एउटालाई दिए अर्को रिसाउँछ, अर्कोलाई दिए एउटा रिसाउँछ । दुई वटा सूर्य बनाएर दुवैलाई एक एकवटा बाँडेर दिँदा पनि नहुने । अब के गर्ने त ? दुवै नेकपाको गुण र विशेषताका आधारमा दुवैलाई सूर्य नै राखेर चुनाव चिह्न दिन सकिन्छ । कसरी भनेर निर्वाचन आयोगका मान्छेलाई खसखस लाग्यो होला । ल हेर्नुहोस् यसरी :सबैभन्दा पहिले सरकारी नेकपालाई हेरौं । सरकारी नेकपामा ओलीपछिका अर्का खम्बा हुन् बादल । बादल गर्जिन थालेपछि सडकको नेकपामा खैलाबैला मच्चिन्छ । सूर्य छेलिने गरी काठमाण्डौको दरबारमार्गमा भाषण गरेको दिन बादलले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई चिडियाखानामा थुन्ने उद्घोष गरे । धेरै नबोल्ने, तर बोल्न थालेपछि के बोलेँ भनेर पनि पत्तो नपाउने बादलको गर्जनलाई सरकारी नेकपाले आफ्नो शक्तिजस्तै ठान्छ । त्यसैले सरकारी नेकपालाई सूर्यसँगै बादलको पनि महत्त्व छ । सूर्य र बादल दुवैको महत्त्व भएको पार्टीलाई चुनाव चिह्न पनि बादल भएको सूर्य या बादल भित्रको सूर्य या बादलले छेकेको सूर्य दिँदा ठिक हुन्छ । निर्वाचन आयोगले बेलैमा बादल र सूर्य भएको चुनाव चिह्नको रुपरेखा कोर्दै गर्दा बेस ।
सरकारी नेकपालाई बादल भएको सूर्य दिएपछि सडकको नेकपालाई चाहिँ के दिने त ? यसमा पनि धेरै टाउको दुखाइरहनु पर्दैन । एकपटक सडकका नेकपालाई हेरौं । ओलीले प्रतिनिधि सभा भत्काएपछि सबैभन्दा धेरै चोट सडकका नेकपालाई परेको छ । कसैले नदेख्ने हुन् कि भनेर नेताहरु छातीमा ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने टाँसेर कहिले माइतीघर त कहिले आफ्नै घरमा भौँतारिन्छन् ।दिनहुँजसो नारा जुलुस गरे पनि ठूला नेताहरुको अनुहारमा उत्साह देखिँदैन । ओलीकै कारण सडकमा पुगेका नेताहरुको अनुहार सूर्यमा लागेको ग्रहणजस्तो देखिन्छ । ओलीले सडकमा पुर्याएपछि छँदाखाँदाको र भैपरी आउने पद नै धरापमा परेकाले पनि नेताहरुको अनुहारमा चमक छाउन सकेको छैन । भाषण गर्दा पनि अँध्यारो अनुहार, नारा लगाउँदा पनि अँध्यारो अनुहार, घर र माइतीघरमा पलेँटी कसेर बस्दा पनि अँध्यारो अनुहार । नेताहरुको यस्तो अवस्था र अनुहार हेर्दा सडकको नेकपालाई ग्रहण लागेको चुनाव चिह्न ठिक हुन्छ ।सरकारी नेकपालाई बादलभित्रको सूर्य, सडकको नेकपालाई ग्रहणले ढाकेको सूर्य । कस्तो लाग्यो त आइडिया !